Nakidzwa neMutambo weChiedza muBoimorto, A Coruña | Kufamba Nhau
Mutambo weChiedza muBoimorto
Susana Garcia | | General, Kufarira
Mazuva ano zvinokwanisika kuenda kumitambo isingaverengeki yemimhanzi mukati medu geography. Zvimwe zvakakosheswa nyika kwemakore mazhinji, asi vamwe vakakwanisa kuzviisa munzvimbo pfupi, senge Boimorto Chiedza Mutambo, iyo inomira pachena nekuda kwezvikonzero zvinoverengeka.
Ino nguva tichaenda kunoona kupi uye chii iyo Mutambo wechiedza, pamusoro pezvikonzero nei ichi chisungo chakatemerwa chisingafanirwe kupotsa. Kune zvinhu zvakawanda zvinoita kuti mutambo uyu ubude pachena kubva kune vamwe vazhinji, kubva kwairi kusvika kuchinangwa chayo.
1 Nhoroondo yeMutambo weChiedza
2 Nzvimbo yemutambo
3 Mapoka akatamba pamutambo
4 Zvivakwa zvemutambo
5 Mimwe mitambo yeGalician
Nhoroondo yeMutambo weChiedza
Mutambo weChiedza wakatanga mugore 2012 neruoko rwemuimbi Luz Casal. Uyu muimbi akaberekerwa muBoimorto, nzvimbo yakasarudzwa kuita mutambo uyu. Kubva ipapo mutambo uyu wanga uchikura uye uchisimukira, nevanyori vane mukurumbira kubva kunharaunda iripo. Asi chiitiko ichi hachina kuzvarwa seimwe nzvimbo yekuita, asi chakazvarwa chine chinangwa chekubatana kuti vawane mari. Iyo zvakare inzira yekuratidzira kukosha kwenzvimbo dzekumaruwa nekusimudzira kwayo, pamwe nekuzvipira kwevanyori kune ino yekumaruwa yeGalician. Kubva 2012, mutambo wave uchiitwa gore rega rega, mukati memwedzi waGunyana, pamazuva ayo zvakare anoita kuti zvive nyore kuenda kuchiitiko ichi, sezvo chisingawanzoenderana nevamwe, chimwe chinhu chinoitika muzhizha.
Mutambo uyu hauitwe mumaguta makuru kana munzvimbo dziri pakati, asi unoitika mu Boimorto huwandu hwevanhu. Iri taundi riri mudunhu reLa Coruña, munzvimbo yemukati. Inowanikwa makiromita makumi mana nemana kubva kuguta reSantiago de Compostela. Iyi inzvimbo yekumaruwa uye yakanyarara, inogamuchira mazana evashanyi mukati memwedzi waGunyana, ichiva nzvimbo yekutarisisa kune vezvenhau uye avo vanosarudza kunakidzwa nechiitiko ichi.
Mapoka akatamba pamutambo
Zvimwe zve mapoka akatamba mushanduro yekupedzisira Ivo ndeaRudo rweLesbian, Kase. Yakatsamwa Monkey House, Agoraphobia, Riff Raff, Marilia Andrés, Nunatak, Chris Barron, Fredi Leis, Monoulious DOP, Rafa Morcego, Los Vinagres, Mordem, Conchita, Rodrigo Mercado, Los Motores Rock de Vigo, Arzúa Music Band, Muscle!, Pelepau , MJ Pérez, Tempo Norte, Santiaguiños de Boimorto, Xoán Curiel, Pandereteiras de Verducido, Zirconita, Dani Barreiro & Shamwari naPedro el Granaíno. Pakutanga kwave nemapoka akaita saMago de Oz kana Jarabe de Palo. Muchirongwa chega chega iwe unogona kufanoona mapoka ari kuenda kunotamba, kuti zvikwanisike kuziva vese maartist kuti vatenge matikiti.
Pamutambo pane zvinonakidza nzvimbo yemusika inova imwe yenzvimbo dzinonakidza kwazvo. Mumusika zvinokwanisika kuwana matanga achiravira chikafu kana zvigadzirwa zve organic uye zvemhizha. Iko kune zvese kubva kubhuku kusaina kusvika kuratidzira uye kuratidza kubika. Izvo zvinokwanisika kuona mafambiro emutambo kuti uzive kana akasiyana mashoo uye kuravira kunogona kuonekwa kuitira kuti usarasikirwa nechero chazvo.
Mumutambo uyu mune nzvimbo yemunhu wese. Kutenda kune zvivakwa zvayo uye akasiyana akasiyana emaartist, ino zvakare inzvimbo inosarudzwa nemhuri kunakidzwa nezuva. Ndokusaka vaine nzvimbo yevana umo vana vadiki vanogona kunakidzwa. Munzvimbo ino mune mitambo, zviitiko uye mashopu.
Imwe nzvimbo yevaraidzo ndiyo cinema uye theatre marquee. Mune ino nzvimbo iwe unogona kuona zvinonakidza zvinyorwa, zvikabudura, mamonologue nemitambo yemitambo. Iyo Mans Space inzvimbo yekutaura nezve zvemabhizimusi uye kuenda kuhurukuro dzinonakidza pazvinhu zvazvino.
El Gastro nzvimbo Mahou Iyi inzvimbo iyo yaunogona kunakirwa dzakasiyana nhambo dzekuratidzira nekubikisa vatungamiriri vechiGalician. Nzvimbo yekuyedza zvinhu zvitsva mune yemhando cuisine.
Mimwe mitambo yeGalician
Galicia inzvimbo iri kuwedzera kuita fashoni, uye saka munguva yezhizha unogona kunakidzwa nemhando dzese dzezviitiko, mhemberero nemapati. Kune mimwe mhemberero dzakawanda dzinogona kunge dzichifadza, uye dzinowanzoitwa mukati memwedzi waJuly naAugust. Iyo Portamérica muenzaniso wakanaka, iyo yakatamira kuguta reCaldas de Reis uye inopa makonzati nemapoka akanakisa pachiitiko chenyika. IVF muVilalba, Lugo, inowanzoitwa munaKurume kana Kubvumbi. Iyo Rumuko Fest muViveiro mucherechedzo wakakura wenyika mumumhanzi weheavy metal. Iyo Ortigueira Mutambo iyo inotipa isu mapoka emapoka uye ndeimwe yevakuru. O Mwanakomana ita Camiño inopembererwa muO Monte do Gozo muSantiago de Compostela kana iyo Atlantic Fest muIlla de Arousa zvimwe zvakakosha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » General » Mutambo weChiedza muBoimorto